Hipódromo de la Zarzuela iyo adduunka tartanka Madrid | Fardaha Noti
Jenny monge | | Fardo, Tartanka fardaha
Hippodrome-ka La Zarzuela waa oo ku taal duleedka magaalada Madrid. Waxay ku taal buurta isla magacaas "La Zarzuela" oo u dhow El Pardo.
Fue Dhismaha ayaa dhammaaday 1941 dhul ay leedahay Hidaha Qaranka ka dib markii lala wareegay Hippodrome kii hore, La Castellana si loo dhiso Wasiirka Nuevos.
Ma waxaad dooneysaa inaad wax yar ka ogaato meeshan?
Kahor intaanan si buuxda u galin taariikhda tartanka La Zarzuela, aan dib ugu noqonno dhawr sano, markii tartanka fardaha laga aasaasay magaalada Madrid oo uu caan ku noqday. Laakiin taa kahor, iyo si aad u kiciso rabitaankaaga, waxaan kuu daayeynaa fiidiyoow tartan ah oo lagu qabtay Hipódromo de La Zarzuela:
1 Bilawgii tartanka fardaha ee Madrid
2 Taariikhda Tartanka La Zarzuela
Bilawgii tartanka fardaha ee Madrid
Hipódromo de La Zarzuela ka hor intaan albaabada loo furin, tartanka fardaha ee caasimada Spain wuxuu lahaa in kabadan qarniyo xamuul ah. Taariikhaha ayaa aruurinaya taas tartankii ugu horreeyay ee faraska waxaa la qabtay 1835 gudaha Alameda de Osuna. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa tartamo kale oo lagu qabtay Casa de Campo iyo Paseo de las Delicias.
Duke of Osuna, yaa u xiiseynayay dunida sine, in Sanadkii 1841, isaga iyo walaalkiis iyo saaxiibo dhowr ah, wuxuu aasaasay Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE) loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo cayaartan sinnaanta ee Madrid, ilaalinta tartanka iyo kor u qaadista taranka jinsiyadaha. Duke of Osuna ayaa markaa ahaa shaqsi muhiim ka ah aaggan.
En Tartankii 1845 ayaa ka bilaabmay tartanka cusub ee Casa de Campo laakiin wali aan lahayn sharci dejin. Waxyaabaha bilaabi lahaa in la yareeyo 1867 iyadoo la ansixiyay koodhka tartanka Faransiiska oo ah tusaale ku habboon la qabsiga.
Tartanka La Castellana waxaa la furay 1878, inkasta oo aan la dhammayn shuqulladii oo dhan. Jidkiisa, oo lahaa xarig 1400 mitir ah, Markii ugu horreysay ee Grand Grandx waxaa la qabtay 1881. Imtixaanada abaalmarinta la sheegay ayaa aasaas u noqon doonta Abaal-marinta Abaal-marinta Qaranka ee soo socota iyo Koobka Boqortooyada Boqortooyada.
1883, Waxay ahayd sanad muhiim u ah aduunka orodka Madrid tan iyo waxaa la abuuray Gudiga Diiwaangalinta Fardaha Isbaanishka.
En 1919 tartankii Aranjuez ayaa la furay gudaha guriga Royal. Tartan ayaa halkaas lagu qaban lahaa. Grand Grandx-ka Madrid waxaa lagu qaban lahaa halkan 1933 maxaa yeelay isla sanadkaas heshiiskii ka-tagsiga ahaa isticmaalka La Castellana Racetrack wuu dhacay.
Qaar ka mid ah Fardaha ugu habboon xilliyadan waxay ahaayeen: Colindres, Nouvel An iyo Atlántida. Qaar waaweyn jockeys sida Victoriano Jimenez iyo Carlos Diez, Waxay sidoo kale ku guuleysan lahaayeen Hippodrome-ka La Zarzuela ka dib joojinta Dagaalkii Sokeeye.
Taariikhda Tartanka La Zarzuela
Xagaaga 1934-kii ayaa dhismaha La Zarzuela Racecourse la ansixiyay. Tartankii loo qabtay in lagu doorto mashruuca waxaa ku guuleystay kooxdii naqshadayaasha oo ka koobnaa injineerka Torroja iyo nashqadeeyayaashii Arniches iyo Domínguez, oo ay dhiirrigeliyeen San Siro Hippodrome ee magaalada Milano.
Shaqooyinka waxay bilaabeen sanadka soo socda. Shaqadii ayaa dhibtay a joojinta Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka awgiis waana sababtaas awgeed inay dib u dhigtay ilaa 1941 oo ah markii la furay tartanka orodka.
In sannadihii ugu horreeyay ee tartanka tartamo badan ayaa la soo dejiyay shisheeyaha si loo yareeyo in ay lahaayeen lumay intii dagaalka socday.
Toban sano kadib, La Zarzuela Hippodrome wuxuu ahaa xudunta u ah nolosha bulshada ee Madrid. Laga bilaabo bartamihii-XNUMX-meeyadii, shaqooyinku way sii kordhayeen.
ka 60naadkii waa sanado barwaaqo dhaqaalaha Isbaanishka, tanina waxay ka muuqataa tartanka orodka iyada oo loo marayo hagaajinta iyo dib u habeynta jidadka. Bukaan socod eegtada iyo tas-hiilaadka jockey-ga waa dhammaadeen. Jeneraal cusub ayaa isna la dhisayaa.
Dhaqaalaha ayaa sidoo kale saameeya jinsiyadaha laftooda, sharadada, abaalmarinta. Sanadkii 1968, Grand Grandx-ka Madrid wuxuu markii ugu horreysay u qaybiyay hal milyan oo pesetas ah oo abaalmarinno ah.
ka 90-meeyadii waxay ahaayeen xilli dhibaato ah loogu talagalay Hippodrome. Sannadkii 1996-kii ayay albaabbadeedii xirtay si ay u casriyeeyaan xarumaheeda. Laga soo bilaabo 2003, waxay haysaa xilli ka mid ah tartamada dhaqdhaqaaqa sanad walba
Bishii oktoobar 2009, tarabuunka La Zarzuela Racecourse waxaa lagu dhawaaqay Hantida Danaha Dhaqanka (BIC), oo leh qayb taallo ah.
Hippodrome, oo ay naqshadeeyeen naqshadayaasha Carlos Arniches, Martín Dominguez iyo injineerka Eduardo Torroja, waa loo tixgeliyey mid ka mid ah mucjisooyinka dhismaha Madrid ee qarnigii XNUMXaad. Waxay ahayd horumar muhiim ah marka laga eego xagga qaabdhismeedka iyo maadiga. Maanta waxay ilaalisaa qaab-dhismeedkeeda sidii loogu talagalay oo ay u hesho booqashooyin badan khabiiro ka socda adduunka oo dhan oo xiiseynaya barashadiisa.
Sidoo kale, gudaha 2012 wuxuu ku guuleystey Abaal Marinta Koowaad ee Kuliyada Architects-ka Madrid ee Soo Celinta iyo Dayactirka waxaa sameeyay istuudiyaha Junquera Arquitectos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Tartanka La Zarzuela iyo taariikhdiisa